Kuderera kweFirefox kuri kuwedzera kucherechedzwa uye kusiiwa kwemapurojekiti kuri kuwedzera | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi isu tinogovana pano pa blog nhau dzekusiiwa kwerutsigiro rwePWA (haisati iri yepamutemo, asi izvo zvinopfuura kusimbiswa) nevagadziri veFirefox yeiyo desktop vhezheni yebrowser.
Uye kunyangwe kana chinyorwa chakadai chatinogovana kune vakawanda chiri chimwezve cheboka, chokwadi ndechekuti sarudzo dzakaitwa neMozilla pamapurojekiti ane hukama neFirefox webhu bhurawuza uye zvakare kune iyo brand, havana kunge vari ivo vakanakisa.
Yese iyi yakaipa streak yauya kuzotambudza Mozilla uye vagadziri veFirefox havangori nekuda kweiyo kuparadza kwedenda, asi zvakare chikonzero chekurasikirwa nemari nekuda kwekurasikirwa kukuru padivi remushandisi.
Tinogona kuona kunetsekana kwakawira Mozilla uye tinogona kuona izvi kubva panguva yatiri Ndakarega Ngura dzichibva mumaoko ake uye danho iri riri mumaoko e Ngura Nheyo (yakagadzirwa naMozilla kuitira kuti uenderere mberi nechirongwa).
Imwe yekurasikirwa kukuru kwakave naMozilla ndeye chirongwa cheServo, chaakaendesa kuLinux Foundation.
Kune rimwe divi, tinogona kurangarira kudzingwa kwevashandi vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu uye izvi nekuda kwedambudziko rakakura rehupfumi rakatarisana naro uye imwe yemhinduro dzaro. was minim tsvimbo yako pasi rose mu quarter.
Pakati pemapoka akanganiswa aive: MDN Web Docs (yaimbove Mozilla Developer Center kana MDC, ipapo Mozilla Developer Network kana MDN) uye izvo zvakare Chikwata chose chakatarisira budiriro yeServo chakadzingwa.
Kune rimwe divi, mune dzazvino nhau uye iyo iyo takagovana pano pablog nezuro umo timu yeFirefox inotsanangura nezviwanikwa zvishoma zvavasingakwanise kuzvishandisa pamabasa anoita kunge ane pesvedzero shoma pabasa ravo.
Uye ikozvino imwe yenhau nyowani yakaburitswa, ndiyo iyoyo Mozilla yakayambira vashandisi nezve kudzikiswa kuri kuuya kweSpeech Proxy server, iyo inopa Izwi Rizadza uye Firefox Voice plugins.
Mozilla yakazivisa izvo sevhisi ichavharwa muna Kukadzi 28, nepo kodhi yekodhi yepulagiji ichizogara mumadura uye icharamba ichiendeswa pasi perezinesi reMPL remahara.
Pamusoro peizvozvo ini ndinotaura zvakare kuti munguva pfupi iri kutevera, zvakarongwa kushambadza gadziriso yeIzwi Fill uye Firefox Izwi plugins, umo ziviso nezve kupera kwekuvandudza kwavo uye rutsigiro zvinoratidzwa.
Uyewo, Musi waFebruary 19, otomatiki kubvisa maitiro eaya mawedzero anotanga, izvo zvichabviswa kubva kumabhurawuza pasina kujeka kutora chikamu kwevashandisi.
Kune avo vasingazive Firefox Izwi, iwe unofanirwa kuziva kuti ichi chigadzirwa cheMozilla chakagadzirwa nechinangwa chekugadzira kuiswa kweyekuyedza izwi rekufambisa system, iyo inokutendera iwe kushandisa izwi rairo kuita zviito zvakasiyana mubrowser.
Iko kuwedzerwa kwakasiyana neyakajairwa ezwi kudzora masisitimu mune yayo maratidziro kwete kugadzira izwi rinotsiva mbeva nekhibhodi, asi kugadzirisa mibvunzo yemitauro yechisikigo, ndiko kuti, yakaita senge mubatsiri wezwi. Semuenzaniso, mushandisi aigona kutumira mirairo senge "mamiriro ekunze azvino", "tsvaga Gmail tabo", "mbeveve ruzha", "chengetedza sePDF", "vhura nzvimbo yeMozilla", zvichingodaro.
Iyo inomiririra Izwi Rinozadza rinopa izwi rekuisa system iyo inokutendera iwe kuzadza mafomu pane mawebhusaiti uye kuisa zvinyorwa uchishandisa hurongwa hwekucherechedza kutaura kweMozilla. Kuzivikanwa kwakaitwa pane server yeMozilla, uko iyo data yakanyorwa nemakrofoni yakatumirwa.
Uyezve, zvinogona kucherechedzwa kuti iyo yakadzingwa sevha yakashandiswa zvakare kutsigira yekuyedza WebSpeech API, iyo yaikwanisa kumhanyisa data rezwi mumawebhu kunyorera uye kuita mashandiro senge kutaura kwekutaurirana uye kuzivikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kuderera kweFirefox kuri kuwedzera kucherechedzwa uye kusiiwa kwemapurojekiti kuri kuwedzera
Ipo software ichiramba, muhoro wevatungamiriri vayo unowedzera ... izvi zvakaitika kare.
Uye chii chatichava nacho muLinux, Chrome? Zvinoita sekunge mahofisi eGoogle afunga kushandisa Edge.
MuMozilla vakapinda muzvibodzwa zvine huchokwadi hwezvematongerwo enyika uye vakasarudza kutarisisa pfungwa dzechikadzi kwete pane mhinduro dzehunyanzvi dzakapihwa nevashandi vavo. Vanhu vazhinji vakatendeseka vakasara, ikozvino vabate
Kana kubvisa mamwe manzwi ezwi akapusa kunge piyano, kuri kuenda mukushomeka…. Ivo vanongotarisa pane izvo zvakakosha chaizvo, bhurawuza ravo, inova ndiyo chete mhosho yakamboitwa nemozilla, vachida kufukidza zvimwe zvinhu, zvisati zvambove nazvo, kana kuzove nekwaniso yekuzviita, kana panzvimbo yekutarisa zvakawanda zvisina maturo zvekuti hazvina basa, vangadai vakagara vakatarisa, chete uye chete pakusimudzira browser yavo, nhasi vangadai vakabvisa Chrome. Ivo chete ndivo vangadai vakawana chinhu chakadai. Iyo nyaya yemari haisi yezve, kana zvisina maturo izvo, ndezvekuziva izvo zvaunazvo nekutarisira zvaunazvo uye ndiro dambudziko, kusaziva kuziva kuzvibata.
Ini ndinogona kutaura kuti chirevo chako chingave chinobudirira, kunze kwekuti nekuda kwekuti Mozilla haina kutarisa chinhu chimwe chete, mapurojekiti akanaka kwazvo akazvarwa uye akakosha kwazvo kunze kweFirefox Rust, kubva ipapo iwe uri kurudyi kwehukuru hweMozilla hwavewo wake Achilles chitsitsinho.
Ini ndinofunga kuti Rust pakutanga yaive chirongwa chega cheumwe wevashandi vavo uye Mozilla ndokuenderera mberi nekuitsigira. Haisi yako projekiti.
Ini ndinobvuma, kunze kwekuti Mozilla yakati yaigona kuchengetedza mapurojekiti akati wandei panguva imwe chete, mhinduro yakanakisa yekukurudzira kuvandudzwa kwemapurojekiti aya yaive nekuita kuti ivo vanogadzira mapurogiramu vagadzire ivo kuti vagone kushanda sezvirongwa zvimwe kupfuura iyo bhurawuza, ichigadzira aya mapurojekiti kusimudzira nekuzvibhadharira mari (zvese programmers nenheyo); sekunge iyo Siseko pachayo yakagadzira vanobatsirana-vanoita purofiti avo varipo Mozilla ine danda (senge nzira yekuita) seyavo wekutanga investor. Nekudaro, akawanda mapurojekiti aizoenderera achishanda achizvimiririra neMozilla asi pamwe nekuwedzera kuti akagadzirwa nechinangwa chekuti anogona kushandiswa mu firefox browser. Ini ndinotya kuti chikonzero icho Mozilla inoita kunge iri kufa zvishoma nezvishoma ndizvo chaizvo nekuti yatadza kuchinja bhizinesi modhi.